ကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိ အားကစားရုံပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၆ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ မြို့တော် Yaounde တွင် အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားပြိုင်ပွဲ၊ ပွဲစဉ် ၁၆ တွင် ကင်မရွန်းနှင့် ကိုမိုရော့စ် အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Yaounde ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိ ကျင်းပနေဆဲ အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားပြိုင်ပွဲ (AFCON) လက်ခံကျင်းပနေသော အားကစားရုံတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ညပိုင်းက လူအုပ်ပိမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၆ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Centre Region အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Naseri Paul Bea က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်သည် ဘောလုံးဝါသနာရှင်များက ကင်မရွန်းနှင့် ကိုမိုရော့စ် နိုင်ငံတို့၏ အရေးကြီးသော ရှုံးထွက်ပွဲစဉ် ကျင်းပရာ အားကစားရုံအတွင်းသို့ သွားရောက်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားသူ အမြောက်အများလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် အားကစားရုံတည်ရှိရာ မြို့တော် Yaounde ရှိ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း Bea က ပြောခဲ့သည်။ သေဆုံးသူအရေအတွက် ဆက်လက်မြင့်တက်လာမည်ကို အာဏာပိုင်များက စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လူဦးရေ ၁,၀၀၀ ကျော်က အားကစားရုံဝင်ပေါက်အား ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းကြစဉ် ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ရာနေရာ၌ ရှိနေခဲ့သူ မျက်မြင်သက်သေ Emmanuel Njomo က ဆင်ဟွာသို့ပြောခဲ့သည်။
“လူတိုင်းက ပွဲစနေတာကို ကြည့်ရှုဖို့အရေး အားကစားရုံထဲဝင်ဖို့ သည်းမခံနိုင်ကြဘူး။ သူတို့က လုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေကို တွန်းဖယ်ပစ်ပြီး ပြဿနာတွေစတော့တာပဲ” ဟု Njomo က ဆိုသည်။ လူအုပ်ပိမှုကြောင့် ကလေးငယ်နှင့် အမျိုးသမီး အချို့ သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်းရှိခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ အားကစားရုံတွင် ထိုင်ခုံ ၆၀,၀၀၀ ရှိသော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် ပရိသတ်ဝင်ရောက်မှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ လက်ခံနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Six die in Cameroon stadium stampede
Source: Xinhua| 2022-01-25 07:45:14|Editor: huaxia
YAOUNDE, Jan. 24 (Xinhua) — At least six people died followingastampede atastadium hosting ongoing Africa Cup of Nations (AFCON) in Cameroon on Monday night, said Naseri Paul Bea, governor of the Centre Region.
Bea said “several” other people were injured and rushed toahospital in the capital Yaounde where the sporting infrastructure is located. Authorities fear the death toll could increase.
Emmanuel Njomo who witnessed the incident told Xinhua that over 1,000 people tried to push their way through the stadium entrance at the same.
“Everyone was impatient and wanted to get into the stadium to watch the match which had already started. They pushed the security barriers and that’s where troubled started,” Njomo said, adding that some children and women either died or were injured during the stampede.
The stadium has 60,000 seats but could only operate at 80 percent of capacity due to COVID-19 restrictions. ■
Photo : Comoros’ Ben Djaloud Salmata Youssouf (L) competes duringaround of 16 match against Cameroon at the Africa Cup of Nations in Yaounde, Cameroon, Jan. 24, 2022. (Xinhua/Kepseu)